Fanambaran’Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Hery RAJAONARIMAMPIANINA | Présidence de la République de Madagascar Fanambaran’Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Hery RAJAONARIMAMPIANINA – Présidence de la République de Madagascar
Accueil » Actualités » Fanambaran’Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Billet publié dans Actualités Discours et déclarations Documents le 22 avril 2018 par webmaster
Eo anatrehan’ny toe-javatra nitranga teto Antananarivo omaly asabotsy 21 aprily, izay namoizana sy nandratrana aina Malagasy indray, dia miondrika am-panajana eo analoan’ny vata mangatsiakan’ireo nodimandry ny tenako, mirary fiononana feno ho an’ireo fianakaviana nidonam-pahoriana. Mirary ihany koa fahasitranana haingana ho an’ireo naratra na olona tsotra izany na mpitandro filaminana.
Miantso ny Malagasy rehetra aho mba ho tony.
Mandala ary miaina ny demokrasia isika eto Madagasikara, nefa dia miendrika fanonganam-panjakàna tsotra izao ny niseho tamin’ny asabotsy teo.
Niainan’ny firenentsika anefa nanomboka tamin’ny taona 1972 ka hatramin’ny 2009 ny savorovoro sy korontana eny an-dalambe. An-jatony ireo zanatsika sy mpiray tanindrazana namoy ny ainy, naratra ary nitondra takaitra tamin’izany. Tsy hita pesimpesenina ny fatiantoka vokatr’izany teo amin’ny toekarena sy ny fihariana ary ny asa.
Iainantsika mandrak’ankehitriny ny takaitra navelan’ireny ary ny fanarenana izany no himasoan’ny fitondram-panjakana izay tarihiko.
Betsaka ny ezaka natao kanefa mbola maro ihany koa ny miandry sy tsy maintsy hotohizana hanamaivanana ny fahasahiranan’ny vahoaka.
Tany tàn-dalana i Madagasikara koa eto aho dia mampitandrina ireo mpamboly korontana sy mpanentana ny mpiara-belona hifandrafy, ka mikatsaka ny hisian’ny rà mandriaka sy hamohizana ain’olona indray, na hitondran’ny zanatsika takaitra, fa handray ny andraikitra tandrify azy ny fitondram-panjakana.
Ireo mpitandro ny filamaninana dia hijoro marindrano amin’ny fitandroana ny ara-dalàna sy ny rafitra demokratika izay misy, ary hanatanteraka hatrany ny adidiny hiarovana ny ain’ny olona sy ny fananany.
Aoka tsy hatao sorona intsony ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana, ary aoka hitsinjo hatrany ny tombontsoan’ireo Malagasy manapitrisa izay tsy miandrandra afa-tsy ny fandrosoana sy ny filaminana.
Mitodika manokana aminareo mpanao gazety aho : aoka tsy ho adinonareo ny maha masina ny asanareo eo amin’ny fitaizana ny olona sy ny fampitam-baovao. Aoka ianareo tsy ho fitaovana handranitra korontana na sanatria, hanentana ny vahoaka tsy hanara-dalàna sy hikomy. Aza adino fa mpanabe ny vahoaka ianareo.
Tokony hiara-manaiky ny rehetra fa tsy vaha-olana ho an’ny ho avin’ny firenentsika na oviana na oviana ny fanongam-panjakana.
Ny tenako, amin’ny maha Filohan’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo ahy, dia hitsinjo hatrany ny tombontsoa ambonin’ny Firenena, olona mpandàla ny fifanakalozan-kevitra rahateo ny Filoham-pirenena.
Masina ny Tanindrazana ! Samia ho tahian’Andriamanitra!
← Les encouragements du Président Rajaonarimampianina à l’équipe de Basket-ball « All Star du Président »
Adresse à la Nation du Président Hery Rajaonarimampianina →